Warar kale oo Caalamka ah iyo Warqabadka SBC International – SBC
Warar kale oo Caalamka ah iyo Warqabadka SBC International
Posted by editor on June 23, 2011 Comments
Madrid:- Warbixin sannadeed uu soo saaray sunduuqa lacagta aduunka IMF ayaa lagu sheegay in dowladda Spain weli ay qarka u saaran tahay dhibaato dhaqaale.
Warbixinta ayaa intaas ku dartay in xukuumadda Spain looga baahan yahay in ay ka shaqeyso dhimista kharashka dowladda islamarkaana a laban laabto dadaalkeeda si ay u hagaajiso fursadaha shaqo abuurista.
Xukuumadda Madrid ayaa qaaday talaabooyin lagu dhimayo qarashaadka dowladda sanadkii la soo dhaafay balse uma baahna amaah lacageed sida dowladaha Giriiga iyo Burtuqiiska (Greece iyo Portugal).
Inkastoo sunduuqa lacagta adduunka uusan ku xusin warbixintiisa in la filan karo in Spain ay u baahan tahay amaah waqti dhow balse waxaa uu ka digay xaaladaha dhaqaale ee sii xumaanaya taasi oo ku keeni karta cadaadis dheeraad ah dhaqaalaha iyo bangiyada dalka Spain.
Sunduuqa lacagta adduunka ayaa ka digay in heerka shaqo la’aanta kajirta Spain ay gaartay 21% ayna tahay wax aan la aqbali Karin.
Xukuumadda spain ayaa isku dayeysa in ay fududeyso dhibaatada shaqo la’aanta iyadoo wax ka bedelaysa xeerarka shaqada si ay ugu dhiirigeliso shirkadaha in ay shaqaaleesiiyaan tiro badan oo dadka aan shaqa haysan.
Xiriirka Dowladaha Sucuudiga iyo Indonesia oo u muuqda mid mugdi sii galaya arrimo la xiriira gabar jaariyad ah
Jakarta:- Xukuumadda Indonesia ayaa u yeeratay safiirkeeda magaala madaxda dalka Sucuudia ee Riyadh si ay ugala tashato cabasho ku aadan dilka jaariyad Indonesian ah oo lagu eedeeyey in ay dishay haweenaydii ay u shaqeenaysay.
Mas’uul katirsan safaaradda ayaa sheegay in jaariyadda lagu magacaabo Rooyaati Bint Saatooyi oo 54jir ahayd la dilay 18 bishan June iyadoo aanan safaaradda lagu wergelin.
Mas’uulka ayaa tilmaamay in safiirku uu kulaabtay dalkiisa sabata oo ah xukuumadda Indonesia ayaa ka xumaatay dilka haweenaydaas , waxayna ku tilmaamtay dulmi, balse waxaa laga yaabaa in dhowaan uu safiirku dib ugu soo noqdo magaalada Riydh .
Mas’uulka Indonesian-ka ayaa intaas ku daray in aysan hubin dilka haweenaydaas islamarkaana ay doonayaan in xukuumadda sucuudigu ay wadahadal lagasho mas’uuliyiinta safaaradda Indonesia ee Riyadh ka hor inta aysan dilin muwaadin u dhashay Indonesia.
Dhanka kale afhayeenka madaxweynaha Indonesia Sosilo Bambang Yodoyono ayaa sheegay in xukuumadda ay ugu yeeratay safiirka Indonesia ee Riyadh wadatashi, sidoo kalana ay xiriir la sameesay safiirka sucuudiga ee Jakarta si ay ugu muujiso sida ay uga xuntay xukuumadda Indonesia dilka mid kamid ah muwaadiniinteeda.
Afhayeenka ayaa intaas ku daray in Indonesia ay ixtiraamayso xeerarka sucuudiga balse ay dareemayaan in sucuudigu uusan ku dhaqmin heshiisyada Geneva ee wada shaqeynta dowladaha.
Afhayeenka ayaa ku nuuxnuuxsaday in dowladda sucuudiga looga baahnaa in ay gaarsiiso talaabada ay ka qaadayso safaaradda Indonesia ee magaalada Riyadh muwaadinka Indonesian-ka
Sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Indonesia waxaa ka shaqeysta dalka Sucuudiga Indonesia tiradooda gaarayso 1.2 malyan halka 23 kamid ah ay dowladda sucuudigu ay ku xukuntay dil balse weli aysan dilin.
Talyaaniga oo ugu baaqay NATO in la joojiyo weerarada mailatari dalka Libya
Roma:- Wasiirka arrimaha dibadda talyaaniga ninka lagu magcaabo Franco Fratteni ayaa ku baaqay in si deg deg ah loo joojiyo howlaglada milatari ee ay NATO ka wado dalka Libya si gargaar loo gaarsiiyo dadka rayidka ah.
Fratteni oo hadal ka hor jeedinayey guddiga arrimaha dibadda Barlamaanka talyaaniga ayaa sheegay in howlgalada milateri oo la joojiyo ay tahay amar aasaasi ah si kaalmooyin deg deg ah loo gaarsiiyo dadka rayida ah.
Fratteni ayaa intaas ku daray in howlagalada milatari oo la joojiyo ay keenayso in laga fogaado waxa golaha qaranka KMG libya uu kacabsi qabo oo ah in Libya ay u qeybsanto labo qeybood.
Frateni ayaa ku nuuxnuuxsaday in suurtagal ay tahay in gargaar deg deg ah la gaarsiiyo goobaha la’aaminsan yahay in xaaladda bani’aadimnimo ay ka sii xumaanayso sida deegaanada ku hareeraysan Misraata iyo xarunta dalka Libya Tripoli.
Wasiirka ayaa dalbaday in warbixinno faahfaahsan in laga helo howlgalada NATO iyo in laga fogaado qaladaadka keeni kara dilka dad rayid ah gudaha dalka Libya.
Hadalka wasiirka ayaa ku soo beegamaya xilli NATO ay qirtay in si qalad ah lagu dilay dad rayid ah duqeymo ay ka geystaan diyaaradaha dagaalka NATO dalka Libya.
Sidoo kale NATO ayaa si qalad ah weerar ugu qaaday kolonyo milatari oo ay leeyihiin mucaaradka 16 June ee la soo dhaafay.
Waxaa xusid mudan in talyaanigu uu ka qeyb qaadanayo howlgalada NATO ee dalka Libya taasi oo la sheegay in la fulinayo qaraar ka soo baxay golaha amaanka oo dhigaya ilaalinta dadka rayidka dalka Libya.
Golaha barlamanka talyaaniga ayaa la filayaa in uu qabto 6 bisha July kulan ku aadan faragelinta xukuumadda talyaaniga dalalka Libya iyo Afghanistan.
Obama oo shaaca ka qaaday in 33 Kun oo askari oo mareykan ah uu kala bixii doono dalka Afghanistan xagaaga socda
Washington:- Madaxweynaha mareykanka Brack Obama ayaa shaaca ka qaaday in uu 33 kun oo askari kala bixi doono sanad gudahiisa kadib markii ay soo dhameystiraan howlaha ay halkaas ka hayaan.
Obama ayaa tilmaamay in 10 kun oo askari uu kala soo bix doono dalka Afghanistan bisha soo socoto.
Obama ayaa intaas ku daray in howsha ciidamada mareykanka ee dalka Afghanistan ay isku bedeli doonto sanadda 2014 taageeo keliya, maadaama shacabka Afghanistan ay la wareegi doonaan mas’uuliyadda amnigooda , waa suu hadalka u yiriyee.
Obama waxa uu ku nuuxnuuxsaday in uu go’aansaday in ciidamada kala soo baxo dalka Afghanistan kadib markii uu 30 kun oo askari oo xoojin ah ay qabteen howlo muhiim ah, kuwaasi oo diirada saaray dhabar jebinta Al-qaacidda , ka hortagida howlaglada Daalibaaniyiinta iyo tababarida ciidamada amaanka Afghanistan si ay u daafacaan dalkooda.
Obama sidoo kale waxa uu so hadal qaaday dilkii hogaamiyihii Al-qaacidda Osama Bin Laden , waxana uu tilmaamay in ay ka heleen macluumaad goobtii uu ku nolaa Osama in Al-qaacidda ay ku mashquulsanayd sidii ay ugu muujin lahayd ummadda Islaamka in mareykanku uu dagaal kula jiro Islaamka, waa suu hadalka u yiriyee.
Obama waxa uu carabaabay in ujeedadoodu ay tahay in Afghanistan ay noqoto meel aamin ah oo aysan suurtgal ahayn in Al-qaacidda iyo kuwa ku xiran ay weerar kaga soo qaadaan mareykanka iyo xulufadiisa .
Obama ayaa khudbadiisa ku soo hadal qaaday kacdoonada ka socda dalalka carabta iyo howlgalada milatari NATo kawado dalka Libya, wuxuuna sheegay in mareykanku taageerayo waxa uu ku tilmaamay dimuqaraadiyada ka soo burqanaysa dunida carabta.